नेपाली फिल्ममा कहिले आउलान् दर्शक ? « Ramailo छ
नेपाली फिल्ममा कहिले आउलान् दर्शक ?
प्रकाशित मिति : Jan 8, 2018
समय : 12:17 pm
केही महिना यता देखि नेपाली फिल्ममा दर्शकको अभाव देखिएको छ । पछिल्लो पटक प्रदर्शनमा आएका फाटेको जुत्ता र झ्यानाकुटी बाहेकको फिल्ममा दर्शकको संख्या गन्न सक्ने मात्रै छन् । यो बिचमा प्रदर्शनमा आएका फिल्महरु व्यापारिक रुपमा स्वतः सुपरफ्लप भए ।
गत शुक्रबार देखि प्रदर्शनमा आएका दुई फिल्महरु ‘राज्जा रानी’ र ‘फिर्के’ को पनि ईनिसियल व्यापार अत्यन्तै न्यून हुन गयो । केही महिनादेखि किन छैनन् त नेपाली फिल्ममा दर्शक ? एक फिल्मकर्मी भन्छन्, ‘यो फिल्म हेर्ने मौसम नै होइन ।’ उनले जाडोयामलाई इंगिद गर्दै भने, ‘दर्शक आफै बिमारी छन्, अनि के आउँथे फिल्म हेर्न ?’ उसो भए सलमान खान र कैटरिना कैफको टाइगर जिन्दा है हेर्न चाहिं किन दर्शक ओइरिए त ?
‘हाइप भएका फिल्म खै आएका प्रदर्शनमा ?’ एक सक्रिय वितरकको भनाई छ, ‘स्टारको फिल्म आएकै छैन् । अब ‘कृ’ लाई नै कुर्नु पर्छ ।’ यो बिचमा प्रदर्शन हुने दयाहाङ राईको ‘मिस्टर झोले’ ले पनि दर्शकलाई हलमा तान्ने उनले आशा व्यक्त गरे । बिचमा प्रदर्शन हुने बाँकी फिल्म भगवान भरोसा रहेको फिल्मकर्मीको भनाई छ ।